Updated 11/19/2017 2:57 PM
Disappointed Zimbabweans watch a televised address to the nation by President Robert Mugabe at a bar in downtown Harare, Zimbabwe Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe's President Robert Mugabe has baffled the country by ending his address on national television without announcing his resignation. Associated Press
Zimbabweans react while watching President Robert Mugabe delivering his speech during a live broadcast at State House in Harare, Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe's President Robert Mugabe has baffled the country by ending his address on national television without announcing his resignation. Associated Press
Zimbabwean President Robert Mugabe delivers his speech during a live broadcast at State House in Harare, Sunday, Nov, 19, 2017. Zimbabwe's President Robert Mugabe has baffled the country by ending his address on national television without announcing his resignation. Associated Press
Disappointed Zimbabweans discuss their shock as the credits roll at the end of a televised address to the nation by President Robert Mugabe at a bar in downtown Harare, Zimbabwe Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe's President Robert Mugabe has baffled the country by ending his address on national television without announcing his resignation. Associated Press
Zimbabweans watch President Robert Mugabe delivering his speech during a live broadcast at State House in Harare, Sunday, Nov. 19, 2017. Zimbabwe's President Robert Mugabe has baffled the country by ending his address on national television without announcing his resignation. Associated Press
A portrait of Zimbabwean President, Robert Mugabe, hangs at the ZANU PF party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party's Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. Associated Press
Members of the ZANU PF Central Committee stand during a meeting at the party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party's Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. Associated Press
Members of the ZANU PF Central Committee attend a meeting at the party headquarters in Harare, Sunday Nov, 19, 2017. A day after huge crowds rallied peacefully in the capital, Harare, for the 93 year old Mugabe to go, the ruling party's Central Committee is meeting on demands by provincial branches to recall President Robert Mugabe as party leader. Associated Press
Protesters demanding President Robert Mugabe stand down ride in the back of a car with a placard "Rest in peace Mugabe" as they drive towards State House in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. In a euphoric gathering that just days ago would have drawn a police crackdown, crowds marched through Zimbabwe's capital on Saturday to demand the departure of President Robert Mugabe, one of Africa's last remaining liberation leaders, after nearly four decades in power. Associated Press
A happy protester pulls a face as he and others stand under a large national flag, at a demonstration of tens of thousands at Zimbabwe Grounds in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. Opponents of Mugabe are demonstrating for the ouster of the 93-year-old leader who is virtually powerless and deserted by most of his allies. Associated Press
Zimbabwean soldiers bump fists with joyful protesters thanking them near Zimbabwe Grounds in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. Opponents of Mugabe are demonstrating for the ouster of the 93-year-old leader who is virtually powerless and deserted by most of his allies. Writing in Shona on poster refers to Mugabe in a respectful way saying "Go and rest now". Associated Press
A crowd of thousands of protesters demanding President Robert Mugabe stand down gather in front of an army cordon on the road leading to State House in Harare, Zimbabwe Saturday, Nov. 18, 2017. In a euphoric gathering that just days ago would have drawn a police crackdown, crowds marched through Zimbabwe's capital on Saturday to demand the departure of President Robert Mugabe, one of Africa's last remaining liberation leaders, after nearly four decades in power. Associated Press
HARARE, Zimbabwe -- The Latest on Zimbabwe's political turmoil (all times local):